Ukudla okunempilo kwama-cysts e-pancreatic > Ukudla ngesifo sikashukela
Izici zokudla kwe-pancreatic cyst
Ukwenziwa kwama-cysts emanyikweni kuvame ukuhambisana nokuvuvukala kwesitho. Ukwelashwa kwalesi sifo ikakhulukazi kuhlinzwa.
Ngaphezu kokwelashwa kwezidakamizwa nokuhlinzwa, isakhi esibalulekile sokululama ngempumelelo ukulandela ukudla okuyisipesheli. Ukudla okunempilo kwama-cysts e-pancreatic kuya ngosayizi kanye nezinga lokukhula kokubunjwa. Ngokuyisisekelo, lokhu kudla kuhlukaniswe izakhi ezimbili. Ngakho-ke, imenyu yesiguli ngaphambi nangemva kokuhlinzwa ingahluka.
Ukudla kwezifo ze-pancreatic kudlala indima enkulu. Ngakho-ke, wonke umuntu one-cyst emzimbeni we-parenchymal kumele azi futhi alandele yonke imigomo yokudla kokudla.
Odinga ukukwazi nge-cyst pancreatic
Isimila ukwakheka okubandakanya izicubu ezixinene ezigcwele ngezinto eziwuketshezi noma eziqinile. I-cyst ingenziwa yasendaweni cishe kuzo zonke izitho nezicubu. Ingazalwa kabusha noma yakheke impilo yonke.
Ngokuya ngendawo esemzimbeni, i-cyst yomsila, inhloko noma yomzimba wamanyikwe. Kunezizathu eziningana zokuthuthuka kwemfundo esakhiweni se-parenchymal.
I-cyst eyiqiniso (dysontogenetic) ingumphumela wokuphazamiseka kwemvelo kokuzala. Maphakathi, ukwakheka kuthunyelwa yi-epithelium. I-pathology incane, ngakho akuvamile ukuthi ikhathaze isiguli futhi ivame ukutholakala ngengozi ngesikhathi se-ultrasound ehleliwe.
Kepha uma isimila se-dysontogenetic senziwa ngenxa yokuphazamiseka kokuhlangana kwama-ducts kanye nokufihlwa okukuwo, khona-ke inqubo yokuvuvukala izokhula emaphashini ngokwakhiwa okwalandela kwezicubu ze-fibrous, okuzoholela ekubukekeni kwe-cystic fibrosis ne-cystic fibrosis.
I-pseudocyst ngaphakathi ifakwe umugqa womzimba nezicubu ze-fibrous. Ukwenziwa kwamanga kwenzeka ngokumelene nesizinda se-pancreatitis, i-pancreatolithiasis, ukulimala kwesitho.
Kuyaphawuleka ukuthi ngokuhlukunyezwa kokudla okungenamsoco notshwala, ubungozi bokuqalwa kwama-cystic kumanyikwe kanyuka kakhulu. Ngakho-ke, kuma-65% eziguli ezinesimo esingalapheki se-pancreatitis yotshwala, ama-pseudocysts ajwayele ukwakha.
Ukuvela kwezimpawu ezinkulu zamanga kuma-pancreas kuvame ukuhambisana nezimpawu eziningi ezingemnandi. Isibonakaliso esiyinhloko ukuqaqamba nobuhlungu obuthakathaka, okwenziwe esiswini esingenhla.
Imvamisa, i-pathology ihambisana nomkhuhlane kanye nokuphazamiseka kwengqondo.
Imikhiqizo ye-cyst evunyelwe futhi evunyelwe
Ukudla kokudla okwenziwe emaphephandabeni kufanele kube nokudla okwakhayo nokugaya ukudla okulula ukushisa. Ngezifo zendlela yokugaya, kunconywa ukuthi kudliwe imikhiqizo yobisi ebilisiwe, izinhlobo ezinamafutha amancane enyama (unogwaja, inyama yenkomo, i-veal) nenhlanzi ebilisiwe, ebhakwe noma edliwayo.
Kuvunyelwe ukusebenzisa isobho elibunjiwe kumhluzi wenyama. Ukusuka emafutheni, ungadla imifino noma ibhotela, kepha ngesilinganiso esilinganiselwe - kuze kufike ku-15-30 g ngosuku.
Kusuka kufulawa kuvunyelwe ukuthi kudle isinkwa sikakolweni, amakhukhi angenazimpawu kanye nama-crackers Ngama-pancreatitis kanye nama-tumans kuma-pancreas, imifino engenayo i-fiber coarse izoba wusizo.
Ungadla amaqanda ngamafomu abilisiwe noma njenge-omelet. Isigaba esivunyelwe sifaka i-pasta ne-casseroles. Izazi zezempilo zeluleka ukudla okusanhlamvu (i-oats, i-buckwheat, ilayisi, i-semolina, ibhali) okuphekwe emanzini.
Kusuka eziphuzweni ungaphuza ama-compotes asuselwa kumajikijolo nezithelo ezomisiwe, ama-decoctions of rose okhiye, iziphuzo zezithelo, itiye ngobisi nelamula. Kuvunyelwe ukudla ama-apula abhakiwe, amajikijolo angenawo omuncu nezithelo kwifomu yashizi.
ukudla okunosawoti, okunamafutha, okunoshukela nokuthosiwe,
ezinye izinhlobo zesobho (i-okroshka, isobho seklabishi, isobho le-beetroot, i-borscht), umhluzi ngokuthosa nezinhlanzi,
Ukubhaka ibhotela, ujamu, ikhekhe, amakhekhe, ushokoledi namanye amaswidi.
isinqe, inyama yedada, ihansi ne-offal,
Ukudla kwe-pancreatic cyst kusho ukwenqatshwa kwemifino enjengegalikhi, isithombo, upelepele obumnandi, amakhowe, iklabishi, u-anyanisi, isipinashi, isitshalo seqanda, isigaxa. Izithelo, ubhanana, ukwatapheya, izinsuku, ama-raspberry, amakhiwane kanye namagilebhisi akuvunyelwe. Imikhiqizo enjalo igcwala ama-pancreas futhi ikhuthaza ukuvutshelwa endaweni yokugaya.
Kuyafaneleka ukulahla i-legumes, kubangela izinhlungu emzimbeni futhi kwandise ingcindezi kuyo. Kuyadingeka futhi ukukhipha iklabishi elimhlophe namapheya kumenyu yansuku zonke. Ziqukethe imicu eminingi, ethinta kabi i-pancreas.
Izinongo, utamatisi, njenge-nicotine, kunomthelela ojabulisayo kulwelwesi lwe-mucous lwezitho zomzimba. Ngokuhlukumezeka njalo, ingozi yokwakheka kwesimila, ukugcotshwa kwejusi kanye nokwanda kwezifo ezikhona kuyanda.
I-Millet nokunye okusanhlamvu okusobala nakho ngeke kube wusizo. Zinama-carbohydrate amaningi, okunzima ukuwacubungula futhi ngokweqile kufakwa ngesimo samafutha.
Okusuka kwiziphuzo ezinama-tumor-formations afana nalawa:
Izici zomsoco nge-cyst kumanyikwe
Isimiso esikhulu lapho kukhona ama-cysts ku-pancreas, yile ndlela ejwayelekile yezinqubo eziyimfihlo esithobeni, esizogwema ukwakhiwa kwamatshe futhi sivikele ukuqhekeka kweziqubu. Lapho uthola ama-cysts kuma-pancreas, ukondliwa kufanele kwenziwe amakhalori amancane ngokunciphisa inani lamafutha kanye nama-carbohydrate asetshenzisiwe.
Kufanelekile futhi ukushiya izitsha ezigcwele kuma-purines, cholesterol kanye nezinto zokwengeza. Lokhu kuzovikela ukungena kwezitho ezinamafutha.
Ukudla kwama-cysts kuma-pancreas, anqunywe ngaphambi kokuhlinzwa, ukugcina ukusebenza okujwayelekile komzimba kanye nokunciphisa ukukhululeka kwawo. Ngakho-ke, ukudla okulinganiselwa kweviki kufanele kufake phakathi ukudla okugcwele amavithamini (B, C, A), amaprotheni (afinyelela ku-120 g ngosuku) nezinto ze-lipotropic.
Kwi-pathologies ye-pancreatic, kunconywa umsoco onempilo. Ukudla kuthathwa izikhathi eziyisithupha ngosuku ngezigaba ezincane. Noma yimuphi umkhiqizo kufanele ube musha, uchobozwe noma ugcotshwe futhi ube nokushisa okungathathi hlangothi.
Njengoba kunama-tumor kwizitho ze-parenchymal, kubalulekile ukunciphisa umkhawulo wokudla ushukela. Iqiniso ngukuthi kwesinye isikhathi ukwakheka kwe-cystic kuthinta i-pancreas, ebhekele ukukhiqizwa kwe-insulin, ebandakanyeka ekusebenzeni kweglucose. Ngokushoda kwama-hormone, ushukela uzoqongelela emzimbeni, okungahle kudale i-hyperglycemic coma.
Njengoba kunesimila esisenziwe kumanyikwe, kubaluleke kakhulu ukugcina uhlobo lokuphuza. Ukusetshenziswa nsuku zonke kwamalitha amanzi ayi-1.5-2 kuzosiza umzimba ukuthi ululame ngokushesha.
Ukudla ngemuva kokwelashwa kokuhlinzwa kwe-tumor kuma-pancreas ezinsukwini zokuqala ezingama-1-3 zokuvuselela kusho ukubulawa yindlala ngokuphelele. Kuvunyelwe ukuphuza amanzi kanye ne-decoction of rose yasendle.
Izinsuku ezingama-4-6 ngemuva kokuhlinzwa, i-omelette yamaprotheni enziwe kahle, itiye ngaphandle koshukela elinama-breadcrumbs, amasobho emifino ecubuziwe, okusamisiwe okune-buckwheat nezinhlamvu zerayisi kancane kancane kungeniswa ekudleni.
Ngosuku lwe-6, kufakwe isinkwa esimnyama, ibhotela nemifino ekudleni. Ngosuku lwesishiyagalombili, kungeniswa izitsha zomphunga wezinhlanzi nenyama, iziphuzo ezivela amajikijolo nezithelo kwimenyu.
Ungayiphatha kanjani i-pancreatic cyst echazwe kuvidiyo kule ndatshana.
I-cyst ingahlotshaniswa ngokombono nangommbila wamanzi. Kuyi-capsule lapho kuqoqana uketshezi, ongakwazi ukukhishwa kwisitho ngenxa yokuqhekeka kweziqubu. Ngokuya ngesizathu sokuthi i-cyst yasungulwa, kungabikwa ukuthi elilodwa lamaqembu amakhulu ayi-2:
eyangempela iyi-cyst, eyakhiwa ngenxa yokuthuthuka kwesitho (ukwakheka okunjalo kuvame ukuba kuncane futhi kungabi yingozi ikakhulukazi, ngoba izindonga zazo zangaphakathi zidalwe ngezicubu ze-epithelial),
yamanga - i-cyst enjalo ingumphumela wokuqhuma kwe-pancreatitis noma ukulimala kwemishini kuma-pancreas (uqukethe izicubu ze-necrotic nezisebenzayo, futhi uketshezi luqongelela ngaphakathi, okuyingxube yegazi, ama-enzymes e-pancreatic kanye ne-tiscritrit.
I-cyst ayikwazi ukwakha ngaphezulu kwamanyikwe uqobo, kepha futhi ezindongeni zezitho ezisemngceleni wayo.
Yini ubungozi be-cyst yamanga?
Lapho kukhona i-pancreatic cyst kumuntu, kuzabonakala lezi zimpawu ezilandelayo:
Ubuhlungu ku-hypochondrium, ngesinye isikhathi ukunikela ngaphansi kwethanga lehlombe noma ingalo yangakwesobunxele,
ukuba khona kwezimpawu zamanyemba,
ukwehla kwesifiso sokudla, ukuncipha kwenhliziyo kanye nokuhlanza,
uma kwenzeka ukutheleleka, ukwanda kokushisa komzimba kuyabonakala.
Uma i-cyst ikhule yaba ngosayizi omkhulu, khona-ke ingadala ukuphulwa kokuphuma kwe-bile ku-duodenum. Ngenxa yalokhu, kuvela izimpawu zokugaya ukudla, kuvela isifo se-jaundice. Lokhu kunganqunywa yizimpawu zangaphandle njengokufiphala komchamo, ukucaciswa kwezindunduma.
Lapho ifinyelela usayizi omkhulu, i-cyst ingaqhuma. Ngalesi sikhathi, umuntu uzwa ubuhlungu obukhulu, bese kuba buthakathaka, ukulahleka kwengqondo kwenzeke. Uma yephuka, wonke uketshezi olunqwabelene ku-cyst luchitheka ngaphezulu kwesisu sesibeletho futhi lungadala ukopha. Ezimweni ezingama-60%, lesi simo sibangela ukufa uma ngabe izinyathelo zingathathwanga ngesikhathi sokuqeda imiphumela yegebe.
Ngaphezu kwalokho, i-pancreatic cyst, ekubeni i-benign neoplasm, ekugcineni ingaguliswa. Ngakho-ke, kubaluleke kakhulu ukuyikhomba esigabeni sokuqala futhi uthathe izinyathelo ngokushesha ukuvimba ukukhula kwayo.
Ukudla njengendlela yokwelashwa nokuvimbela
Odokotela bathi ukuba ne-pancreatic cyst akudingi ukunakekelwa ngokushesha kwezokwelapha. Uma usayizi we-cyst awudluli ku-5 cm, kukhona amathuba aphezulu azowaxazulula yedwa emavikini ambalwa, ngokuya ngokudla okukhethekile. Ezimweni eziningi, yilokhu okwenzekayo.
Kodwa uma ngemuva kwamasonto ayi-6 i-cyst ivele ingaxazululanga nje kuphela, kodwa futhi ikhuphuke ngosayizi, ukuhlinzwa kungadingeka. Lesi simo singenxa yokuthi isiguli singazange sinamathele ezimisweni zokudla okufanele ngalesi sikhathi, ngakho-ke, kubaluleke kakhulu ukulandela ukudla ngokushesha ngemuva kokuthola i-pancreatic cyst.
Ukudla akubandakanyi ukusetshenziswa kwanoma yikuphi ukudla okungajwayelekile noma okubizayo. Yakhelwe phezu kwemigomo yokudla okufanele futhi ingasiza ekuqedeni ama-cysts e-pancreatic hhayi kuphela, kepha nezinye izifo eziningi zesistimu yokugaya ukudla. Imithetho eyisisekelo yokudla okunempilo kwama-cysts e-pancreatic:
Ukudla kufanele kuthathwe ngezikhathi ezithile kaningi ngangokunokwenzeka (izikhathi ezingama-5-6 nsuku zonke). Kuyafaneleka ukuthi unikeze ukukhetha kuleyo mikhiqizo egayishwa kalula.
Ukudla kufanele kube kakhulu ngendlela ye-liquid, semi-liquid noma ifomu lomhlabathi. Hlafuna ukudla kahle.
Okuthandwayo kufanele kunikezwe ezinhlotsheni ezinjalo zemikhiqizo yokusebenzisa njengokupheka, ukubamba, ukuhambisa. Ukugaya i-oven kuyamukelekile.
Kuyenqatshelwe ngokuphelele ukuphuza utshwala. Ungadli okuthosiwe, okunamafutha kakhulu nezinongo zesipayisi.
Kufanele ukhawule ukusetshenziswa kwamaswidi kanye nemikhiqizo yokubhaka.
Kuyadingeka ukunikeza ukukhetha kokudla okune-protein eningi, ngoba kuyadingeka ekubuyiselweni kwezitho zomzimba. Ngaphezu kwalokho, imikhiqizo equkethe amaprotheni yemifino akufanele ibe ngaphezu kwama-30% esisindo sokudla okuphelele kwamaprotheni.
Ukusetshenziswa kwamafutha nama-carbohydrate kufanele kuncishiswe, kepha akufanele kungashiywa ngokuphelele, ngoba ukudla komuntu ophethwe yi-pancreatic cyst kufanele kube ngokuhlukahlukahluka ngangokunokwenzeka futhi aqukethe zonke izinto ezidingekayo ekusebenzeni komzimba okuzinzile.
Yini okungadliwa nokungadliwanga
Ngaphezu kwemigomo ejwayelekile yokudla okunempilo, ukudla okukhona kwe-cyst kunezici ezithile ezibandakanya ukuba khona kokudla okungavunyelwe. Lokhu kufaka izinhlobo zenyama enamafutha (ingulube, iwundlu), kanye nokuqina, okugaywe kahle, njengama ducklings, ihansi noma umdlalo. Kepha inyama engenamafutha inganelisa umzimba ngenani elifanele leproteyini futhi ivikele nokonakala kwamafutha kwesibindi.
Imikhiqizo yobisi nobisi olubilisiwe enamaphesenti amaningi wokuqukethwe kwamafutha nayo ayivunyelwe. Ngenkathi kunconywa ushizi we-cottage shizi ongenama-acid. Kuyadingeka futhi ukuthi uqaphele ukusetshenziswa kobisi ngendlela yalo emsulwa. Kungcono ukuyisebenzisa njengesithako kumasobho noma amasosa. Lapho kukhona ama-cancts e-pancreatic, esinye sezosi ezivunyelwe yi-bechamel. Kepha kulokhu, kuyadingeka ukwenza izichibiyelo ezithile kulungiselelo lwayo. Okokuqala, ufulawa awudingi ukuba yi-passerovat, futhi okwesibili, ukunciphisa umkhawulo wezinongo, kufaka nosawoti.
Amaqanda ngokujwayelekile awanconywa, kepha ungenza i-omelet yamaprotheni eyenziwe ebhuthini ephindwe kabili. Kuvunyelwe ukusebenzisa amaqanda njengezithako kwezinye izitsha.
Izimbali namakhowe akuvunyelwe ngokuphelele, ngoba kunzima kakhulu ukugaya. Ukusetshenziswa kwe-oat, semolina, ilayisi noma i-buckwheat kwamukelekile.
Ukusuka kwimifino, ungadla amazambane, ama-beet, izaqathe, i-zucchini noma ithanga. Kepha kufanele ukhumbule ukuthi imifino ethengiswa esitolo esingesikhathi sesizini imvamisa iqukethe izibulala-zinambuzane nezinye izinto eziyingozi, ngakho-ke udinga ukuzikhetha ngokuqapha. Izithelo, kufanelekile ukunikela okuthandwayo kuma-apula angenayo i-acid, angadliwa ngendlela ebhakwe, ebilisiwe noma eyomile.
Eziziphuzweni, ungasebenzisa imifino yezithelo nemifino engeyona i-acid. Ama-Kissels nama-compotes wezithelo omisiwe nawo ayanconywa. Kepha ikhofi neziphuzo zekhofi kufanele zikhohlwe. Zonke iziphuzo ezinotshwala nez eziphansi zenqatshelwe ngokuphelele. Kungcono futhi ukuyeka nokubhema ngokuphelele noma okungenani kunciphise kakhulu umthamo wansuku zonke we-nicotine.
Uma ulandela ngokuqinile yonke imithetho yokudla, i-cyst ingaxazulula ngokwayo ngamathuba aphezulu aphezulu.
Umzimba ulwa nazo zonke izifo, udinga nje ukumsiza kulokhu, futhi ungaziphikisi inqubo yokuzilapha.
Ngaphezu kwalokho, ngokwenza umsoco ofanele nsuku zonke, awukwazi ukuqeda izifo zohlelo lokugaya kuphela, kepha futhi wehlise isisindo.
Incazelo Ejwayelekile Yesifo
I-cyst iyindlela yokugula ngesimo sesimila, esiqukethe izindonga nokuqukethwe. Ukwakheka okunjalo kungenzeka ngezicubu ezahlukahlukene nezindawo zomzimba, kuyazalwa noma kutholakala. Okuqukethwe yi-cyst nokwakheka kodonga lwayo kuyehluka ngokuya ngendlela yokwakheka nendawo okutholwe kuyo i-pathology.
1 I-cyst retention - imvamisa yakheka izicubu nezitho ze-glandular ngenxa yokuqothuka komgodi we-gland.
I-2 Ramolytic cyst - ukwakheka kwenzeka ngenxa ye-necrosis yesitho noma isayithi lezicubu.
I-3 cyst ebuhlungu - umphumela wokulimala kwezicubu ezithambile.
I-4 Parasitic cyst - umzimba wegciwane elisogobolondweni.
I-5 Dysontogenetic cyst - ukwakheka kokuzala okwenzeka nokwephulwa kwenqubo yezakhi zezicubu nokwakheka kwesitho ekuqaleni kwesigaba sokukhula.
ukubonakala kwama-cysts amakhulu wamanga we-pancreatic kungahle kuhambisane nobuhlungu obuthakathaka bokuqaqamba esiswini elingaphezulu, i-dyspepsia, ukwephulwa kwesimo esijwayelekile, ukukhuphuka kwezinga lokushisa ngezikhathi ezithile, ukubonakala kwesimo sokufana nesimila esiswini.
Nge-cyst ye-ovarian, umjikelezo wokuya esikhathini uphazamiseka, kubuhlungu obuthambile esiswini esingezansi, izinhlungu ngesikhathi sokuya esikhathini, umuzwa wokucanuzelelwa kwenhliziyo. Umthamo wesisu uyanda, ubuhlungu endaweni yesitho sangasese kungenzeka.
Njengoba i-cyst yakheka ezindaweni ezahlukahlukene zomzimba, akukho okujwayelekile, okujwayelekile ukudla okulesi sifo. Kukhulunywa ezinye izinhlobo zokugula, ngokudla okunconyiwe futhi okungavunyelwe.
Imikhiqizo ewusizo ye-cyst
I-pancreatic cyst - Imikhiqizo evunyelwe:
imikhiqizo kafulawa kusuka kufulawa webanga lokuqala nelesibili, amakhukhi angenakuthunyelwa kuwo, isinkwa esidala, inhlanzi ebilisiwe noma inhlanzi enamafutha, inyama yomvundla noma yenkukhu, inyama yenkomo enamafutha aphansi, i-veal (inyama kumele ibe nengxenye), isobho ngo-ukhilimu omuncu, imikhiqizo yobisi olunobisi oluncane, ubisi , ushizi omusha, amaqanda abilisiwe, ilayisi, i-buckwheat, ibhali, i-oats, limited - semolina ne-porridge kakolweni.
Izindlela zokupheka zabantu zokuphulukisa ama-cysts:
ijusi elicwengiwe lamaqabunga e-burdock nge-cyst yezinso lithathwa izinyanga ezimbili kathathu ngosuku ngaphambi kokudla, i-pulp kusuka ku-burdock nayo iyasetshenziswa,
ukuhlanganiswa kwamalunga amadevu wegolide ku-vodka, kuthathwe esiswini esingenalutho ekuseni, kusihlwa imizuzu engamashumi amane ngaphambi kokudla,
impuphu kusuka kumagxolo e-aspen, ethathwa kathathu ngosuku ngengxenye yezipuni,
itiye eliluhlaza ngokufakwa uju nobisi, phuza kabili ngosuku,
ukuthathwa kwezimpande zezinqe ezinamahlwili aqhamukayo, othathwa ngengxenye yengilazi kabili ngosuku,
ama-lingonberry amasha ngo-ukhilimu, ukhilimu omuncu, uju,
impande ebomvu ifakwa ku-thermos, futhi ithathwa kathathu ngosuku ngehora elilodwa ngaphambi kokudla,
tincture ye-elecampane ngokufakwa kwemvubelo. Ithathwa kathathu ngosuku ngemuva kokudla,
decoction wezitshalo ezilandelayo: i-dioecious nettle, uchungechunge lwe-tripartite, i-tricolor violet, umhlonyane, umhluzi weSt. thatha kaningana ngosuku ngaphambi kokudla,
i-parsley tincture ithathwa kancane phakathi nosuku,
i-tincture yotshwala yezimbali ezimhlophe ze-acacia, noma amagxolo ayo, thatha kathathu ngosuku, isipuni esisodwa,
i-decoction of walnut partitions, thatha kathathu ngosuku ngengxenye yengilazi,
ukufakwa kwamakhambi alandelayo: umlotha ojwayelekile wezintaba, i-chamomile yokwelapha, i-cuff, isikhwama somalusi, i-viburnum bark, i-pink Rhodiola, i-mamawort, igcizelela ku-thermos, yathatha inkomishi yekota kathathu ngosuku,
i-tincture yeziqu namakhanda we-clover - alungiselelwe kusihlwa, edakiwe ntambama,
i-tincture yamagilebhisi ku-vodka, ukwamukela kwenziwa ngezipuni ngaphambi kokudla,
iresiphi ye-anyanisi: i-anyanisi ephakathi ithululelwa uju lonke, bese kwenziwa iswayi kuyo ngalo ebusuku (iresiphi isetshenziselwa ukwelapha ama-cysts e-vaginal),
i-tincture eyenziwe kumakhowe we-porcini ilungiswa nge-vodka noma utshwala, futhi ithathwe kabili ngosuku ngethisipuni.
Imikhiqizo eyingozi neyingozi ene-cyst
imikhiqizo ebhemayo, inyama nenhlanzi, amakhemikhali aphathwe ngemifino, ukudla okuneziphuzo zokudla (tartrazine E 102, boric acid E284, amarzant E123, sodium tetracarbonate E 285, gluconic acid E574, tin chloride E512, polydextrose E1200, Quillaja E999 ekhishwe, erythrosine E) , isinkwa sokubumba, ama-apula abolile, ama-sea buckthorn, ezinye izithelo, izithelo, imifino, amajikijolo, amajusi, amasimu noma okulondoloziwe, okulungiselelwe kusuka ezintweni ezingavuthiwe ezibunjiwe, amahlandla amaningi abilisiwe, isoso le-soy, amantongomane aguqulwe ngophawu, uviniga, ukudla okusemathinini, ukudla okusheshayo.
Khawula ukusetshenziswa kwekofi, imajarini namafutha kusuka emafutheni emifino, inyama enamafutha nesibindi, utshwala, ushukela, usawoti, isinkwa se-yeast,
I-cyst yezinso: ukusetshenziswa ngokulinganisela kokudla kwamaprotheni, kungafakwa amakhrayoni, imvuthuluka, ubhontshisi, ubhontshisi kanye nenhlanzi yasolwandle ekudleni - inani elikhulu le-urea, i-guanidine, i-polyamine, i-creatinine yakhiwa ngesikhathi semetabolism yale mikhiqizo. Ukudla kuyafana nalokho okusetshenziselwa isifo sezinso.
I-Pancreatic cyst: zonke izinhlobo zemidumba (kuphakama amagesi kuletha izinhlungu lapho ingcindezi isetshenziswa ezithweni ezizungezile), iklabishi elimhlophe namapheya (okuyingozi endabeni nokuqukethwe kofibha lwesihlahla), amabele (kuqukethe ama-carbohydrate amaningi, agcinwe ngokwengxenye yamafutha), ugwayi, izinongo, utamatisi, utshwala (ukucunula ulwelwesi lwama-mucous, okuvusa ukutholakala kwezinkinga, isimila, ukukhushulwa okukhuthukile kwejusi).
Izinhlobo zamathumbu e-cystic
Kufanele kushiwo ukuthi wonke ama-cysts e-pancreatic ahlukaniswe abe yiqiniso futhi amanga.
1. I-cyst yangempela
I-cyst yangempela ibizwa ngokuthi i-malgenations yokuzalwa, lapho kuvela khona inqwaba yamakhankethi ngesikhathi sokukhula kombungu kumanyikwe. Isimila esinjalo asikhuli, izindonga zaso zangaphakathi zigxunyekwe ngesendlalelo se-epithelium, futhi i-patity ngokwayo ingagcwaliswa ngoketshezi.
2. I-cyst yamanga
Ngokuphikisana neqiniso, kwakhiwa i-cyst yamanga ohlelweni lomsebenzi womuntu, ngokwesibonelo, ngemuva kwe-pancreatitis e-acute noma i-pancreatic necrosis. Emzameni wokuhlukanisa indawo ethintekile kuzicubu ezinempilo, umzimba ngokwawo udala nxazonke kwakhe inqwaba yezicubu ezithintekayo, isb. i-cyst. Ama-neoplasms anjalo awanayo isendlalelo se-epithelial ezindongeni zawo.
Ngaphezu kwalokho, ama-cysts kuma-pancreas ngokuvamile ahlukaniswa ngokuya ngendawo yakhe. Kulokhu, kungavela isimila:
Uma sazi ukuthi ama-cysts eqiniso awandile kakhulu, futhi ukubonakaliswa kwawo nokwelashwa akufani neze nokuhlukile ekwelashweni kwama-cysts angamanga, khona-ke sizobheka izinhlobo zamanga ze-neoplasms.
Izimbangela zokwenziwa kwe-cyst
ezimweni ezingama-84%, i-cyst yakhiwa ngenxa yokwanda kwe-pancreatitis,
ezimweni eziyi-14%, ukulimala kwepancreatic kube yimbangela yesimila.
2% osele ngu:
Ukugcina i-pseudocyst. Ukuvuvukala okunjalo kuvela esimweni sokuqhekeka kwesiteshi esivelele sama-pancreas. Akumangazi ukuthi isimila esinjengalesi sikhula njalo ngosayizi futhi sinokuqhuma ngaphansi kwethonya lezizathu eziningi zepiloji.
I-parasitic pseudocyst. Le cyst ivela ngaphansi kwethonya lezimungulu, ikakhulukazi, ama-flatworms of opisthorchus. Lama-helminths avimbela ukuphuma kwejusi le-pancreatic, okubangela ukonakala kwezicubu ze-pancreatic kanye nokuvela kwesimila.
Ngaphezu kwalokho, izinto ezitusekayo ekwakhiweni kwe-cystic neoplasms zingaba:
ukusetshenziswa kabi kotshwala (39%),
ukukhuluphala ne-cholesterol ephakeme egazini ngenxa yokulimala kwe-lipid metabolism (31%),
Uhlobo II isifo sikashukela mellitus (15%),
isifo se-gallstone (14%),
ukusebenza ezithweni zamapheshana emathunjini (1%).
Kunoma yikuphi, uma umuntu enezimpawu zomtholampilo zokwenziwa kwe-cyst, kufanele ubone udokotela ngokushesha futhi ahlolwe.
Izimpawu ze-pancreatic cyst
Ukuboniswa kokwakheka okukhulunywa ngakho kungahluka ngokuphelele, kuya ngohlobo nendawo yesimila. Isibonelo, uma i-cyst ingakafinyeleli ku-5 cm ububanzi futhi igcwele uketshezi, ingahle ingazivezi nakancane. Kulokhu, kungatholakala kuphela ngengozi. Kodwa-ke, amanye ama-cysts, afinyelela ku-3 cm ubukhulu, aqala ukufaka ingcindezi kwizitho eziseduze futhi angadala ubuhlungu emuva noma esiswini.
Njengoba ezimweni eziningi imbangela yokwenziwa kwe-cyst yi-pancreatitis eyinduna, lapho kuvela isimila, umuntu uzwa izinhlungu ezinzima zebhande, ukugaya kwakhe kuyaphazamiseka futhi nesitofu se-pancreatic "fat" siyabonakala. Ngaphezu kwalokho, isiguli esinjalo sinomkhuhlane nobuthakathaka. Kwezinye izimo, isikhumba ne-sclera yamehlo kungahle kuphuzi, okubonisa indawo ye-cyst ekhanda lamanyikwe. Kulokhu, isicanucanu nokuhlanza kuyangezelelwa ezimpawu ezifakiwe.
Kuyini ukubonakala, ubuhlungu be-pancreatitis buvame "ukunikezwa" emuva kanye ne-hypochondrium yangakwesobunxele, futhi ayihlali phansi ngemuva kokuthatha ama-NSAIDs. Ngemuva kokuhlaselwa kobuhlungu obude, njengomthetho, kuvela isikhathi sokuthamba, okuthiwa "igebe lokukhanya", ngemuva kwalokho isimo siba sibi kakhulu. Ngendlela, kwesinye isikhathi ubuhlungu obukhulu esiswini bungakhombisa ukuqhuma kwe-cystic cavity, nezimpawu zokudakwa okuvela emva kwabo kungakhombisa ukukhula kwezifo ezinzima ezithathelanayo (i-peritonitis ne-sepsis).
Uma i-cyst icindezela i-portal vein, isiguli siqala ukuvuvukala kanzima kwemilenze. Lapho isimila esikhulayo sicindezela kuma-solar plexus, izinhlungu kule ndawo zingakhululeka kuphela ngama-analcics ama-narcotic anamandla. Umuthi uyazi amacala wokukhula kwe-cyst kangangokuba aze avimbe ngokuphelele ukukhanya kwezibilini, abangele ukuthuthukiswa kokuvinjwa kwamathumbu.
Uma i-neoplasm yephula umsebenzi oyimfihlo wendlala, isiguli singase sizwe umlomo owomile nokoma okukhulu. I-cyst enjalo kufanele isuswe ngokushesha okukhulu, ngoba ukuphazamisa ukuhlangana kwamanqina, kuholela ku-polyuria (ekwandeni ukwakheka komchamo), bese kuthi ekuthuthukiseni i-hyperglycemic noma hypoglycemic coma.
Lapho i-cyst itholakala endaweni ekhanda le-gland, udokotela angabona uphawu lokuvela ngaphambili kwe-peritoneum. Kuyiqiniso, lolu phawu alubonakali kuwo wonke umuntu, kodwa ngoba iziguli ezinama-cysts asolisayo asolisayo zithunyelwa ukuxilongwa kwe-ultrasound. Njengomthetho, le ndlela yokucwaninga yanele ukusungula ubukhona be-neoplasm futhi inqume ngosayizi wayo. Uma kudingeka izifundo ezengeziwe, i-CT noma i-MRI iyasetshenziswa. Kodwa i-radiography kuleli cala ayinikezeli udokotela noma yiluphi ulwazi. Ukuhlolwa kwegazi nakho akunangqondo futhi, okuwukuphela kwento engaxwaya lochwepheshe ukwanda okuqhubekayo kwezinga le-amylase ekuhlolweni kwegazi elinamakhemikhali.
I-cyst ephumayo ayinakushiywa ngaphandle kokwelashwa, ngoba ngaphezu kokucindezela izinzwa nezitho eziseduze, le neoplasm ingavusa lezi zinkinga ezilandelayo:
ukopha ngenxa yokuqhuma kwemithambo yegazi,
Noma yikuphi kwalawa macala kusongela ubuthi begazi nokukhula kwe-peritonitis, ukubeka impilo yomuntu engozini, okusho ukuthi isiguli esine-cyst ekhonjwa sidinga ukwelashwa okwanele.
Ukwelashwa okubonakalayo kwama-cysts
Kungenzeka ukulwa neoplasm ngaphandle kokuhlinzwa kuphela uma zonke lezi zimo ezilandelayo zihlangatshezwa, okungukuthi:
ububanzi besimila abudluli ku-2 cm,
isiguli asinabuhlungu obukhulu
akukho jaundice elivimbelayo.
Kulokhu, ungazama ukuqeda i-cyst ngezindlela zokubambisa. Lokhu, okokuqala, kufanele uqhubeke nokudla okulambile. Ngemuva kwezinsuku ezintathu, kuzokwazi ukubuyela ekudleni okuchithekelayo, lapho konke okunamafutha, okuthosiwe nosawoti kungafakwanga khona. Ukubhema nokuphuza nakho akufakiwe. Futhi isiguli sidinga ukunamathela ekuphumuleni kombhede izinsuku ezingama-7-10. Konke lokhu kuzonciphisa ukukhiqizwa kwama-pancreas ama-enzyme.
Ukuze isimila singavuthi futhi singabangeli i-peritonitis, inkambo yama-antibiotics inqunyelwe isiguli nge-cyst. Njengomthetho, lezi zingama-antibacterial agents eziqhamuka eqenjini le-tetracyclines noma i-cephalosporins. Ukunciphisa izinhlungu, isiguli esinjalo sinconywa ukuthatha ama-blockon pump blockers (i-Omez noma i-Omeprazole). Futhi ukuze kwenziwe lula ukwakheka kwama-enzymes yi-pancreas, anquma i-Creon noma i-Pancreatin.
Uma kungapheli inyanga yokwelashwa okunjalo kungekho ngcono, futhi i-cyst ingaxazululi, odokotela banquma ukuhlinzwa.
Ukwelashwa okuhlukile kwama-cysts
Kunezinye izindlela ezingasetshenziswa, kanye nokwelashwa kwezidakamizwa, ukusiza ukubhekana neoplasm evelayo. Into esemqoka ukusebenzisa izindlela ezingezona zendabuko zokwelashwa kuphela ngemuva kokuvumelana nodokotela.
1. Inombolo yokuqoqa amakhambi 1. Thatha ngokulingana okulingana kwe-yarrow, celandine nezimbali ze-calendula. I-1 tsp gcwalisa leli qoqo ngama-250 ml wamanzi ashisayo bese ushiya amahora amabili ukuthola ukumukelwa kokuphola. Thatha leli khambi kufanele libe yi-2 tbsp. kathathu ngosuku ngaphambi kokudla.
2. Inombolo yokuqoqa amakhambi 2. Thatha izingxenye ezi-2 ze-calendula eyomile notshani obomvana, bese ufaka enye ingxenye ye-cinquefoil kubo. Faka umkhiqizo, bese ulungisa ukumfaka ngendlela efanayo naleyo echazwe kwiresiphi edlule. Indlela yokuphatha iyafana.
3. I-Grass stonecrop. Ngokuphinda uqoqe i-cyst, ungasebenzisa utshani be-stonecrop, okumele bufakwe kumasaladi izikhathi ezi-1-2 ngosuku amaqabunga amathathu amasha.
4. Ukupholisa ukumnika. Ukubhekana ne-cyst ngaphandle kokuhlinzwa, lungiselela ukumnika okhethekile. Thatha ngokulingana ngokulinganayo amahlamvu ama-lingonberry, ama-blueberries nama-sitrobheli, engeza ama-stigmas ommbila namaqabunga obhontshisi. Isipuni somxube onjalo uthela ingilazi yamanzi abilayo bese ushiya ukumisa amahora angama-8. Ekuseni, govuza futhi uphuze esiswini esingenalutho. Thatha lo muthi amasonto amabili, emva kwalokho udinga isikhathi sekhefu esithatha isonto kanye nenkambo yesibili yokwelapha.
Umuthi wesimanjemanje unezindlela ezimbalwa zokuhlasela ezingasusa lapho ungasusa khona i-pancreatic cyst. Amasu anjalo empeleni awalimazi isikhumba futhi awabangeli izingqinamba zangemva kokusebenza.
Okuthandwa kakhulu kulokhu kungukusebenza kwe-percutaneous, okwenziwa ngaphansi kokugadwa kwe-ultrasound. Imvamisa zivame ukusetshenziselwa ukwakha ama-cysts emzimbeni nasekhanda lesibeletho. Umnyombo wokuhlinzwa ulula - ngemuva kokubulawa izinzwa, isiguli sifakwa ngenalithi yokubhoboza ehlinza isikhumba esifundeni se-epigastric. Ngokuya ngosayizi we-neoplasm, uchwepheshe angenza:
I-cyst drainage. Ngemuva kokuthatha wonke uketshezi olusuka emgodini we-cyst, udokotela usungula amanzi, adale ukuphuma kwamanzi ngokweqile. Ukusebenza okunjalo akwenziwa ngevolumu enkulu ye-cyst futhi uma isimila sivalela umsele wendlala.
Isifo se-cyst. Ngemuva kokuqothula i-cyst, uchwepheshe wethula isisombululo esikhethekile esisebenza ngamakhemikhali emgodini waso ukuze ahlanze i-patity, abese enamathisela izindonga ze-cyst bese ezibeka esikhundleni sezicubu ezihlangene.
Imiphumela emihle itholakala nokususwa kwe-laparoscopic ye-neoplasm. Kulokhu, ukusikeka kabili kwenziwa esikhunjeni, hhayi ngaphezu kuka-2 cm ubude, lapho udokotela asusa khona i-cyst esebenzisa amathuluzi e-endoscopic. Kulokhu, uchwepheshe angaqhuba:
Ukujabulisa i-cyst. Ngalesi nokuhlinzwa, udokotela uvula isimila, awuphathe ngezixazululo ze-antiseptic, abese edonsa kanzima. Ngendlela, ukuvala i-patity, ungasebenzisa i-electrocoagulator ngokwenza i-occlusion ye-cyst, kepha kulokhu, ukudonswa kwamanzi kufanele kusungulwe kuze kufike ezinsukwini eziyi-7.
Ukususwa kwe-laparoscopic kwengxenye ye-gland. Endabeni yesimila esikhulu, udokotela ohlinzayo angahle asuse enye ingxenye yamanyikwe. Isibonelo, uma kuvela i-cyst ekhanda lesikhumba, udokotela angayisusa yonke ikhanda. Lokhu kungukuphatheka kobuhlungu, noma kunjalo, kunciphisa kakhulu ingozi yokwakhiwa kabusha kwe-cyst.
Lapho i-cyst evelayo ingenakususwa ngezindlela ze-endoscopic noma ze-percutaneous, udokotela ohlinzayo wenza ukuhlinzwa ngokuvula isisu sesisu sesiguli. Le yindlela ebuhlungu kakhulu, edinga ukululama isikhathi eside, kepha kulokhu, udokotela angenza noma yiziphi izinqubo zokuhlinzwa. Njengomthetho, kuyenziwa:
Ukususwa okuvulekile kwengxenye yamanyikwe.
I-Excision, kanye nokukhipha kwangaphandle kwe-cyst.
Ama-cysts ama-pancreatic akavamile. Kodwa-ke, inkinga enjalo ingakudida kakhulu impilo futhi iholele emiphumeleni emibi kakhulu. Ukuvimbela lokhu kungenzeki, qapha impilo yakho bese uthintana nodokotela ngezimpawu zokuqala zomalavuza.
Ngifisela wena impilo enhle!
Lesi sifo sikhonjiswa yizimpawu ezilandelayo:
Nge-cyst kuma-pancreas, ukwelashwa nokudla kuvunyelwana nodokotela. Kunezinye izindlela ezingekho, kanye nokwelashwa kwezidakamizwa, ezisiza ukubhekana ne-cyst. Ukuqeda i-cyst kungenzeka ngenxa yamakhambi:
i-hypericum yokulwa nokuvuvukala, i-chamomile, i-yarrow, i-dieelle,
i-elecampane yokubuyisela esimweni esihle, ukukhwehlela, ukhula, i-aloe,
i-antispasmodic fennel, imint, i-oregano, i-valerian.
I-infusions evela ekuqoqweni kwezitshalo zokwelapha izoba nesandla ekululameni:
Thatha izingxenye ezilinganayo zezihlahla, i-celandine kanye ne-marigolds. Ku-1 tsp iqoqo, uthele i-250 ml koketshezi oshisayo bese ugcina ukwakheka kwamahora ama-2. Sebenzisa 2 tbsp. kathathu ngosuku ngaphambi kokudla.
Thatha izingxenye ezi-2 zezindwangu ezingavuthiwe ze-marigolds ne-tansy bese ufaka ingxenye eyi-saberfish. Ku-1 tsp iqoqo, uthele 250 ml ka-ketshezi oshisayo, uwukhiphe amahora amabili. Phuza 2 tbsp. ngaphambi kokudla kathathu ngosuku.
Utshani be-Stonecrop bungezwa kuma-saladi kabili ngosuku, amaqabunga amathathu amasha.
Ama-infusions okwelapha ngokumelene neoplasms
Emacembe ama-cranberry, ama-blueberries kanye nama-sitrobheli engeza ama-stigmas ommbila namaqabunga obhontshisi. 1 tbsp ukuqoqa uthele ingilazi ka-ketshezi oshisayo bese ubeka ukwakheka kwamahora ayi-8. Sebenzisa umuthi esiswini esingenalutho amasonto amabili, bese ukhipha isonto bese uqhubeka nokwelashwa futhi.
I-Celandine inokuphawuleka okuhle ngenxa yamandla ayo okulwa nokuvuvukala kanye nokulimala kwamanxeba. Hlanganisa inani elilinganayo le-celandine, i-calendula ne-yarrow. I-1 tsp uthele ingilazi ye-ketshezi eshisayo bese umi ukwakheka kwamahora ama-2. Thatha inkomishi eyi-1⁄4 ngaphambi kokudla.
Ungenza futhi ukumnika we-hypericum, dieelle, chamomile.
Thatha inani elilinganayo le-1 tsp. amaqabunga aluhlaza okwesibhakabhaka, ama-currants, ama-lingonberry. Thela uketshezi oshisayo, phuza inkomishi engu-1⁄4 ngaphambi kokudla izinsuku eziyi-14.
Ukudla okunempilo nge-pancreatic cyst kukhethekile, imikhiqizo kufanele ichotshozwe futhi ingabi-namafutha, ifushwe. Ukudla okunezakhamzimba kuze kube kasithupha ngosuku.
amakhukhi wamahhala kashukela, izinkwa eziphekiwe, iziqhekeza,
inhlanzi ebilisiwe noma entshontshiwe, unogwaja, inyama yenkomo, inyama yenkukhu ethambile,
isobho ngo-ukhilimu omuncu, imikhiqizo yobisi oluncane
okusanhlamvu irayisi, i-buckwheat, ibhali, i-oats, i-semolina enomkhawulo kanye nama-groats kakolweni.
inyama ebhemayo, inyama enamafutha nenhlanzi,
isinkwa sokubumba, ama-aphula abolile, ama-sea sihlahla sivame ukutholakala,
zonke izithelo namajusi aqhamuka kumkhiqizo obumba,
isosi yesoya, ukulondolozwa, ukudla okusemathinini, ukudla okusheshayo kokudla.
Khawula ukusetshenziswa kweziphuzo zekhofi, amafutha namafutha omsuka wemifino, iziphuzo ezidakayo, ushukela, usawoti, imikhiqizo yesinkwa esingemvubelo.
Imenyu yokudla elinganiselwa ye-cyst pancreatic ibukeka kanjena:
Ukudla kwasekuseni kokuqala: iphalishi kusuka ku-oatmeal, itiye eliluhlaza ngaphandle koshukela.
Isidlo sasemini: patties amazambane abiwe.
Isidlo sasemini: isobho semifino, isigqila esintsundu.
Ngaphambi kwesidlo sakusihlwa: izithelo ezibhakiwe.
Ukudla kwakusihlwa: ama-meatballs ngemifino.
Ukudla kwasekuseni kokuqala: umusi omelette, compote.
Isidlo sasemini: imifino ebhakwe.
Isidlo sasemini: inyama ebilisiwe nge-pasta, isobho yemifino.
Ngaphambi kokudla kwakusihlwa: i-pdding ye-curd engenasisekelo.
Ukudla kwakusihlwa: amazambane abunjiwe ngesaladi yemifino ngaphandle kukaviniga, ujusi wezithelo.
Ukudla kwasekuseni kokuqala: iphalishi le-buckwheat, itiye eliluhlaza.
Isidlo sasemini: yogathi we-200 g.
Isidlo sasemini: inhlanzi enukayo ngesaladi yemifino ngaphandle kukaviniga, jelly.
Ngaphambi kokudla kwakusihlwa: Amakhukhi angenazimpawu, compote
Ukudla kwakusihlwa: i-zucchini ecubuziwe.
Ukudla kwasekuseni: iphalishi yerayisi, itiye.
Isidlo sasemini: izihlahla zemifino, iziqalo zama rose rose.
Isidlo sasemini: isobho ngemifino egayiwe, isifuba senkukhu enomusi.
Ngaphambi kokudla kwakusihlwa: amaqanda aqhekeziwe netiye eliluhlaza.
Ukudla kwakusihlwa: Inyama yomvunda ebilisiwe.
Ukudla kwasekuseni kokuqala: iphalishi kusuka ku-oatmeal, compote.
Isidlo sasemini: inhlanzi eshisayo, ukumiliselwa amakhambi.
Isidlo sasemini: isobho ngemifino kanye nebele lenkukhu.
Isinaphi: amaqanda aqhekeziwe, ujusi.
Ukudla kwakusihlwa: inhlanzi entshontshiwe nelayisi.
Ukudla kwasekuseni kokuqala: i-semolina porridge netiye.
Isidlo sasemini: pudding ushizi we-cottage shizi.
Isidlo sasemini: izimbotshana ezinomusi, isobho lamazambane.
Isinaphi: ama-apula abhakwe.
Ukudla isidlo sakusihlwa: ama-inyama ane-noodle, i-kefir.
Ukudla kwasekuseni: ama-noodle obisi kanye nomhluzi we-rosehip.
Isidlo sasemini: ushizi wekotishi nobisi.
Isidlo sasemini: isobho le-buckwheat, isifuba senkukhu ebilisiwe, ujeli.
Ngaphambi kwesidlo sakusihlwa: amakhukhi nejelly.
Ukudla kwakusihlwa: umqulu wezinhlanzi nejusi karoti.
Ukudla nge-cyst pancreatic: yini okungaba futhi okungakwazi, imenyu, imithetho yezondlamzimba
Ukudla okune-pseudocyst yamanyikwe, njengakwamanye ama-pathologies alesi sitho, kuyingxenye ebalulekile yokwelashwa okuyinkimbinkimbi.
Njengoba odokotela begcizelela, eminyakeni yamuva nje kube nokwanda kokuxilongwa kwalesi sifo. Ezimweni eziningi, lokhu kuyinkimbinkimbi ye-pancreatitis (90%), kanti i-10% esele ingumphumela wokulimala kwe-pancreatic. Njengoba ubona, uma umuntu engenayo ngokuphelele i-pancreatic pathology, khona-ke amathuba okuba nokuhlukumezeka kwe-cystic kuncishiswe kakhulu.
Yini ama-cysts nama-pseudocysts kanye nezimpawu zawo
I-cyst iyi-sac (i-capsule) yesimilo, equkethe uketshezi olunezinhlayiya ezifile ze-gland, izinto zayo ze-enzymatic, igazi nokuqunjelwa kwe-purulent. Yonke le nto ayikwazi ukuqedwa emzimbeni ngenxa yemithambo ye-gland evinjiwe.
I-cyst yeqiniso yakhiwa ngenxa yokuhlukumezeka kwe-pathological kumanyikwe. Lincane ngosayizi futhi alibeki ingozi ebonakalayo kubantu, ngoba kunesendlalelo se-epithelial ohlangothini olungaphakathi lwezindonga zalo, olungekho ngokuphelele kuma-cysts wamanga.
I-pseudocyst iba khona ngemuva kokuhlasela okungazelelwe kwe-pancreatitis noma ngemuva kokulimala kwangaphandle kwe-gland. Ama-cysts angokoqobo nawamanga angavela hhayi kuma-pancreas kuphela, kodwa nakwezicubu zezitho ezisondelene nawo.
Ukuba khona kwe-cystogenesis kuboniswa yizimpawu ezinjalo:
Ubuhlungu obukhulu ku-peritoneum ku-hypochondrium yangakwesobunxele, lufinyelela emuva engalweni yangakwesokunxele noma engakwesobunxele.
E-palpation, kutholakala uphawu oluyindawo ye-gland.
Uma ukutheleleka kungena ku-cyst, kuphakama izinga lokushisa lomzimba eliphakeme.
Umlomo omile nowomile (polydipsia).
Uma i-cyst ihlaba umxhwele ngosayizi, ingavusa ukubambezeleka kokuphuma kwe-bile ku-duodenum 12, ebonakala ngezimpawu ezilandelayo:
Umbala omnyama womchamo.
Mhlophe ukunyakaza kwamathumbu.
Ngemuva kokukhuphuka ngevolumu ukuya phezulu, i-cyst iyakwazi ukuqhuma, kulokhu kukhona:
Njengamanje lapho iqhuma, wonke uketshezi oluqoqiwe lungena ngokushesha emgodini we-peritoneal bese lukhipha ukopha kakhulu.
Amathuba wokupholisa umsoco
Ukudla okunama-cyst kuma-pancreas kungasiza ukuletha isikhathi sokululama, kusukela kulokhu ukwakheka kwezifo nakwezinye izifo zaso.
Isiguli kufanele silandele ngqo le mithetho elandelayo:
Kubalulekile ukubheka ukudla ngesikhathi se-cyst kuma-pancreas, okungukuthi, udle ngezikhathi ezithile futhi okungenani izikhathi ezingama-5-7 ngosuku.
Nikeza kuqala ukudla okugayeka kalula.
Ukudla kufanele kube uketshezi, ukungaguquguquki kwe-lime noma kukhethwe kahle.
Qiniseka ukuhlafuna ucezu ngalunye lokudla ngokucophelela.
Lapho upheka, kusetshenziswa izindlela ezilandelayo zemikhiqizo yokuhlunga: ukubilisa, ukuhambisa, ukubhaka nokubamba.
Ukudla okuqukethe amaphrotheyini kumele kube khona ekudleni, ngoba kuyadingeka ukulungisa izimbotshana ezilimele. Ngesikhathi esifanayo, ukudla okunamaprotheni emifino okungenani aku-30% wesamba semikhiqizo yamaprotheni nsuku zonke.
Izitsha ezinamafutha kanye nama-carbohydrate kufanele abekhona ngevolumu elincane, kepha azinakushiywa ngokuphelele. Ukudla kukhiqizwa kucatshangelwa ukwehlukahluka, kufaka phakathi zonke izinto ezidingekayo emzimbeni womuntu.
Yikuphi ukudla okufanele kugwenywe
Ngaphezu kwemigomo eyisisekelo yokudla ye-cyst, kukhona lonke uhlu lokudla okungavunyelwe:
Zonke izinhlobonhlobo zenyama enamafutha nenzima (ingulube, amadada, umdlalo).
Imikhiqizo yobisi yobisi nemuncu enokuqukethwe okunamafutha amaningi.
Ubisi oluhlanzekile (lokupheka kuphela).
Uma ulandela ngokucophelela zonke izidingo zokudla kokudla, khona-ke ukwakheka kwe-cystic kuzozixazulula ngokwakho.
Yikuphi ukudla okuvunyelwe ukukudla?
Iziguli eziningi zibuza ukuthi yini ongayidla nge-pancreatic cyst, ukuze unze isimo sakho? Ithebula kufanele lifane ncamashi nelinconyelwe i-pancreatitis:
Ukuhluka kwamafutha aphansi enyama nenhlanzi.
Ushizi ophansi we-non-acid cottage shizi, kefir.
I-Oatmeal, i-buckwheat, i-semolina, ilayisi.
Kwenqatshelwe ukuphuza amanzi ashisayo noma abandayo kakhulu, futhi zonke izitsha kufanele zidliwe zisesimweni esifudumele kuphela. Ngasikhathi sinye, imifino nezithelo zonyaka kufanele zikhethwe, ngoba ama-sitrobheli amasha noma ama-cherries athengiswa ebusika agcwele i-chemistry.
Ngaphezu kwalokho, kungcono ukudla lezo zipho zezithelo nemifino yemvelo ekhula esifundeni seziguli.
Ungadla kanjani ngemuva kokukhishwa kwe-cyst?
Ukudla ngemuva kokususwa kwe-pancreatic cyst kusiza umzimba obuthakathaka uvuseleleke emuva kokusebenza ngaphandle kwezinkinga, kube nomthelela ekubuyiselweni ngokushesha imisebenzi yamapheshana emathunjini.
Ekuqaleni, ngemuva kokuhlinzwa kwe-pancreatic, ukuphumula komzimba okuphezulu kuyadingeka, ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukudala izimo ngaphansi kwayo lapho ukukhiqizwa kwama-enzyme kuzoncishiswa kube okungenani.
Izinsuku zokuqala ezingama-1-3, ngokususelwa kobunzima bokuhlinzwa, isiguli akufanele sidle lutho, kodwa siphuza kuphela uketshezi (ilitha eli-1 ngosuku). Lokhu kungaba ngamanzi kanye nesilinganiso se-rose yasendle, ukulungiselela lapho bathatha isipuni esisodwa. amajikijolo achotshoziwe futhi uthele inkomishi e-1 abilayo amanzi. Kulokhu, qiniseka ukuthi ubilisa amanzi ngaphansi kwesivalo imizuzu eyi-10. Umhluzi kufanele udakwe endaweni efudumele, nasezitolo ezincane zokungcebeleka.
Kusukela ngosuku 4 kuye ngosuku 6, ukudla kunwetshwa kancane. Ungasebenzisa itiye elibuthakathaka ngaphandle kweshukela ngocezu oluncane lwe-cracker emhlophe, i-omelette yamaprotheni enomswakama, isobho elibunjiwe ngaphandle kosawoti, i-buckwheat ecubuziwe noma iphalishi lelayisi, elilungiselelwe lisuselwa ngobisi emanzini. Zonke izitsha ezingenhla zilethwa kumenyu kancane kancane, okuwukuthi, ngosuku.
Ngosuku lwe-7, ngesimo sezempilo esijwayelekile sezempilo, isinkwa esomile, ibhotela (hhayi ngaphezu kwe-15 g ngosuku), neminye imifino yengezwa ekudleni.
Kusukela ezinsukwini eziyisishiyagalombili zenyama nezinhlanzi zingeniswa, ngesimo sesoufflé ephuma emikhiqizweni eyenziwe ngaphambi kokupheka.
Kusukela ngosuku 10, ama-soufflés athathelwa indawo ngama-dumplings nama-meatball, nawo athe anamafutha.
Ukudla okulandelayo kwenzelwe ukuqinisekisa ukuthi umzimba uthola inani elanele lamaprotheni, futhi ukusetshenziswa kwama-carbohydrate zinthu kuncishiswa kube okungenani. Isibonelo, ushukela uvame ukungafakwa, futhi inani likasawoti ngosuku akufanele lidlule i-8 g. Ngokuphathelene nevolumu yewuketshezi, udinga ukuphuza okungenani amalitha ayi-1.5-2 ngosuku.
Ukwehluka okuhlongozwayo kwezitsha kukhombisa ngokusobala ukuthi yini ongayidla nge-cyst kuma-pancreas, okuyinto ukudla ongakuthanda:
Isobho elilula lemifino, elifaka inani elincane lebhotela lenkomo noma isipuni sekhilimu omuncu ephansi.
Ama-puree amasobho asuselwa kumhluzi ovela enyameni engenamafutha ngokufakwa kwe-nokunye okufana nokolweni, i-vermicelli, i-oatmeal, ilayisi, i-semolina, ukholifulawa, izaqathe, amathanga.
Inhlanzi ebilisiwe noma enesifiso sezinhlobo ezinamafutha amancane.
Izithelo nemifino emnandi ihanjiswa etafuleni noma endaweni eyomile, noma ebhakwe kuhhavini. Ama-compotes wezithelo omisiwe nama-apula abhakisiwe alusizo kakhulu.
Kuma-ketshezi, ukumfaka i-rosehip, itiye elibuthakathaka ngokufakwa kobisi noma ucezu lukalamusi kungathandwa. Izithelo ezisanda kulungiswa namajusi we-berry kufanele zixutshwe namanzi ngesilinganiso esingu-1: 2.
Ukulungisa okusanhlamvu, irayisi, i-oatmeal, i-buckwheat kuyasetshenziswa, kepha i-semolina nebhali akufanele kudliwe kaningi. I-Porridge ibilisiwe emanzini noma ngokufakwa kobisi, bese idlula nge-blender.
I-pasta ne-casseroles zenziwe ngabo.
Amaqanda ama-omeleette abilisiwe noma aphunga.
Ngokuqondene nezitsha zenyama, lapho-ke ukulungiselela kwabo sebenzisa izinhlobo zokudla zenyama: inkukhu, inyama yomvundla, inyama yenkomo neye-turkey. Baphekwa ngendlela ebilisiwe noma enomusi, futhi ngaphambi kokukhonza, bayasulwa noma bachobozwe.
Izinhlobo ezinamafutha amancane obisi nemikhiqizo yobisi.
Izolo isinkwa esimnyama namhlophe, amabhisikidi kanye nama-crackers enziwe ngesinkwa esimhlophe.
Imifino ngaphandle kwamafayibha ama-coilse ayabiliswa noma abhakwe.
Njengoba ukwazi ukubona, itafula lokudla lokugula liyahlukahluka futhi likuvumela ukupheka izitsha ezihlwabusayo futhi ezinempilo, ngenkathi kusiza ukugwema ukucindezelwa kumanyikwe nasesiswini.
Imenyu eyisampula yosuku olulodwa
Ukudla kwasekuseni: i-oatmeal ewuketshezi emanzini (noma ihlanjululwe ngobisi), i-omelet yomusi, umhluzi we-rose rose.
Ukudla kwasekuseni kwesibili: i-compote yezithelo eyomile, iyogathi enamakhekhe ama-biscuit.
Isidlo sasemini: isobho kumhluzi wemifino enenkukhu kanye no-noodle, ama-nokunye okufana nokolweni okusikiwe, izihlahla zezithelo.
Isinaphi: i-apula ebhakwe.
Ukudla isidlo sakusihlwa: inhlanzi ebhakwe nemifino ethosiwe, i-cottage shizi casserole, itiye ngaphandle koshukela.
Ungadla: i-kefir enama-crackers.
Izazi zokudla zigcizelela ukuthi uma umuntu ebuka umsoco ofanele empilweni yakhe yonke, lapho amathuba okuba ne-pancreatitis kanye ne-cysts, njengezinkinga zawo, kwehla kube yi-zero. Kepha uma bekukhona ukuphazamiseka okunjengokuvela kwe-cyst yamanga noma yangempela kumanyikwe, khona-ke udinga ukulalela zonke izincomo zikadokotela bese ulandela ngokuqinile yonke imiyalo yakhe, kufaka phakathi umsoco.
Indlela yezokwelapha ebanzi kuphela ezosiza umuntu ukuthi enze ngokushesha umsebenzi wayo yonke imisebenzi yomzimba wakhe ukuba uyijwayeze.
I-pancreatic cyst, ukwelashwa nokudla
I-cyst ukwakheka kwe-cavity enamakhompiyutha anama-enzyme, amagciwane, ukhunta. Ukudla nge-pancreatic cyst kuphoqelekile ekubuyiselweni okujwayelekile kohlelo lokugaya ukudla.
Ukudla okunempilo ngemuva kokuhlinzwa
Ukudla ngemuva kokususwa kwe-cyst kuma-pancreas kuhlinzeka ukwenqatshwa okuphelele kokudla kwezinsuku ezintathu zokuqala, izixazululo ezikhethekile zamaprotheni kanye ne-carbohydrate ziphathwa ngaphakathi. Ngemuva kwalokho ukudla kuvunyelwe kuze kube izikhathi eziyi-8 ngosuku:
isobho elihlanganisiwe elinama-crackers,
15 g bhotela,
compote nezithelo ezomisiwe.
Ungayiphatha kanjani i-cancts pancreatic
Ama-pancreas yisitho esibalulekile sohlelo lokugaya ukudla, ama-enzymes awo aqhekeza ama-carbohydrate, amafutha kanye namaprotheni abe yizinto ezilula. I-gland inesakhiwo se-morphological esigqugquzela ukwakheka kwemithambo ye-cystic kwezicubu zezitho.
Ukwakheka okunjalo kunganikeza izimpawu zomtholampilo, futhi kungaba ukutholwa ngengozi kuskena se-ultrasound. Ukwelashwa kwama-cancts e-pancreatic kuncike ezicini eziningi, kuvame kakhulu ukuthi abahlinzayo bahlanganyele kulolu daba. Lapho ukhetha amaqhinga wezokwelapha, kufanele wazi ukuthi kungani kwakheka nokuthi siyini isibikezelo sokuthuthuka kwayo.
Ama-cysts ayiqiniso ayizindlela zokuzalwa ezihambisana nokuphula ukwakhiwa kwezicubu ze-pancreatic kwinqubo yokukhula kombungu womuntu. Njengomthetho, azikhuli, zifakwe ngaphakathi ngoxhaxha lwamaseli we-epithelial, futhi angagcwaliswa ngoketshezi.
Amafomu e-cysts wamanga lapho i-pancreatitis eyingozi noma i-pancreatic necrosis ibhubhisa izicubu zomzimba. Umzimba ufuna ukudiliza isiza esinjalo kusuka kwezicubu ezinempilo bese wenza inqwaba yezicubu ezithintekile ezizungezile.
Ukugcinwa kabusha kubizwa ngokuthi ama-cysts okwenzeka lapho i-gland duct ivinjiwe. Ukwakheka okunjalo kuthambekele ekukhuleni futhi kungaqhuma ngaphansi kwethonya lezinto eziningi ezilimazayo.
Ama-parseic pseudocysts avame ukwakhiwa yi-echinococcus. I-parasite enjalo, njenge-opisthorch, nayo inomthelela ekuwohlokeni kwe-cystic ye-pancreas, ngoba ivimbela ukuphuma kwejusi le-pancreatic.
Ngokuya ngezimbangela zokwenziwa kwe-pancreatic cyst, amaqhinga okuthola ukwelashwa azohluka.
Ukuze ungangenwa yi-opisthorchiasis, udinga ukuhlola ngokucophelela izinhlanzi zasemfuleni lapho kuba khona i-opisthorchiasis. Ngaphezu kwalokho, kuyadingeka ukuthi uqaphele ukugcotshwa kukasawoti ngesikhathi sokufafaza kwezinhlanzi kanye nesikhathi sokulashwa kokushisa ngesikhathi sokupheka.
I-pancreatic cyst: izimpendulo zayo yonke imibuzo
I-pancreatic cyst iyi-pathological benign Ukwakheka kwezicubu zesitho, imvamisa inesimo esiyindilinga, esigcwele uketshezi. Kokuqukethwe kutholakala: ama-mucus ngamanani amakhulu, amaseli afile, izakhi zegazi noma ukujula okuphezulu kwama-enzyme wokugaya ukudla.
Ingane ingazalwa ine-pancreatic cyst, okuwukungalungiseki kwezicubu ze-glandular. Ngokuvamile, ukwakheka okunjalo kutholwa yi-ultrasound. Kwezinye izimo, i-pancreatic cyst yisifo esitholwayo.
Izakhiwo ezitholakele yilezi:
ukugcinwa, kwakheka endlebeni ngenxa yokuphuma kokuphazamiseka kwemfihlo yayo,
Ukuwohloka - kwenzeka ezinqubweni zokuvuvukala, ukulimala, isimila, ukuvuvukala,
iyanda, engahle ibe namaseli amabi ahlukaniswe kabi (cystadenocarcinomas),
Ukwahlukaniswa ngokwezokwelapha ngokwahlukana ngokwezici ezimbili: izici zokuziphatha zesakhiwo sodonga nokwenziwa kwaso kwezicubu zomzimba.
Ngokusho kwe-morphology, le mininingwane yemfundo yile:
Kuliqiniso. Lawa amafomu okwakheka kabusha, i-cavity yawo eboshwe ngamaseli we-epithelial.
Amanga noma ama-pseudocysts. Lokhu kuyizakhiwo ze-pathological ngaphandle kwesendlalelo samaseli we-epithelial.
Ngokwasendaweni ku-pancreatic parenchyma, ama-cysts omzimba, ikhanda nomsila ahlukaniswa.
Ukudla okusetshenziselwa ukwelapha ama-cysts
Ukudla kukhuthaza ukwelashwa futhi kunciphise izimpawu zenqubo ye-pathological. Umsoco kufanele ube nempilo, uphilile futhi uchithe isikhathi. Yidla kaningi, kepha hhayi ezingxenyeni ezinkulu. Bakhetha izitsha eziwuketshezi neze-ketshezi, amazambane abunjiwe, ijeli nezinhlamvu. Ungadli ukudla okuthosiwe. Ukwelashwa okushisa kufanele kube ntekenteke ngangokunokwenzeka: kubiwe, kuhhavini, imikhiqizo ibilisiwe, i-stewed.
Izimpawu ze-pathology zincike ngosayizi, okwasendaweni, ukusondela kwendawo yokwakheka kuya ekugcineni kwezinzwa. Ukwakheka okuncane okungacindezeli izicubu eziseduze nemicu yezinzwa kungenzeka kungabonakali ngokwazo futhi kungenazimpawu. Ngokukhuphuka kwezinga lokukhula, kuboniswa uphawu lobuhlungu.
Inqubo eyingozi ibonakala ngokubonakaliswa okunobudlova nobuhlungu obukhali emgodini wesisu. Lapho inqubo ingapheli, izinhlungu ziba buteketeke, izimpawu ziba buthaka futhi zivame ukudala ukungaphatheki kahle.
Kubalulekile! Isimpawu sobuhlungu obukhulu esinezimpawu zokudakwa komzimba kungakhombisa ukuqhuma kodonga lwe-cyst noma ukuqina kwayo, okudinga ukulaliswa esibhedlela ngokuphuthumayo.
Uma lokhu kudalwa kwe-pathological kugcizelela i-solxus ye-solar, khona-ke isiguli sithatha isikhundla esiphoqekile se-elbow-elbow, futhi isimo simiswa nezidakamizwa ezinamandla.
Izimpawu ze-pancreatic cysts zingukuphazamiseka kwemizwa njalo: umuzwa wobunzima kanye nenausea, ukuhlanza, ukuphazamiseka kwesitulo. Njengoba izakhi zomzimba zingangeni kahle emathunjini ngenxa yokuntula ijusi le-pancreatic, isiguli singancipha kakhulu futhi sizizwe sibuthakathaka.
Ukuqalwa kwendawo yesisu se-pancreatic kuthinta ukuthuthukiswa kwezimpawu. Izimpawu ze-jaundice ziyabonakala uma i-cyst itholakala endaweni ekhanda, imilenze ivuvukala lapho kuthwalwa i-portal vein, ukuchama kuyathinteka lapho ukwakheka kusondele kuma-ureters.
Uma i-cyst ingashadile, inosayizi ongekho ngaphezulu kwama-20 mm futhi kungekho zimpawu zokuthi kungenzeka ukuthi une-jaundice evimbayo, udokotela anganquma ekwelashweni okulondoloziwe (okungelona ukuhlinzwa). Ekuqaleni, isiguli sinqunywa ukudla okuqinile, ngaphandle kokudla okubabayo, okunamafutha, okuthosiwe, notshwala. Ukudla okunjalo kusiza ukunciphisa imfihlo yama enzymes wokugaya amaseli wamanyikwe futhi kunikeza umzimba ukuthula okuthe xaxa. Isiguli sinqunywe inkambo yokwelashwa ngama-antibiotics, ama-proton pump inhibitors kanye nokwelashwa kwe-enzymatic. Uma ngemuva kwamasonto ayisithupha ukwelashwa okungelona iqiniso kungakhiqizi umphumela oyifunayo, ukuhlinzwa kungadingeka.
Imininingwane ebalulekile! Noma iyiphi i-cyst iwusongo emzimbeni. Ungaqhuma futhi kuqhume isisu esiswini, kubangele i-peritonitis esongela impilo. Futhi, ukwakheka kwe-benign kungahle kube kubi ngokuhamba kwesikhathi, ngakho-ke kuyadingeka ukwenza ukwelashwa ngesikhathi esifanele.
Kunezindlela eziningi zokuhlinzwa ukuze ususe i-pancreatic cyst.
Udokotela ohlinzayo angenza ubuqili:
i-sclerotherapy ngesisombululo samakhemikhali ngemuva kokukhipha i-cyst ukuqeda ngokuphelele ukwakheka,
ukukhishwa kwe-puncture ngokususwa kwe-tube yokuphuma koketshezi.
Ukususa ukwakheka, njengomthetho, kwenziwa ngaphandle kwezihibe ngokusebenzisa ama-punctures - ngendlela ye-laproscopic.
Indlela yesibili - ukusebenza kwe-laparotomy, kuyindlela ebuhlungu, lapho kudingeka khona isigaba sethambo lesibeletho. Isiguli sidinga isikhathi eside ukuze silulame ngokuphelele ekusebenzeni okunjalo. Le nketho iphindiselwa ezimweni ezisongela impilo kakhulu.
Amakhambi esintu ukwelashwa
Ukulungiswa kwamakhambi kuyasebenza, lezi zingaba izingxube ezixubile ze-calendula, tansy, i-wort yase-St, i-chamomile, i-yarrow, izimbali ze-dieelle kanye ne-celandine.
I-Celandine kufanele icophelele ikakhulukazi ngenxa yokugcwala okukhulu kwezinto ezisebenzayo esitshalweni ezingakhipha izimpawu zobuthi. Ukwelashwa kwama-cysts nawo ayasebenza: amaqabunga e-lingonberry, currant ne-aloe.
Kumele kukhunjulwe ukuthi amakhambi okwelapha angahle abe ne-contraindication futhi abangele ukungezwani komzimba.
I-Tansy, calendula kanye ne-plantain ku-2: 2: 1 zizalwa engxenyeni yesine yelitha lamanzi abilayo futhi kwagcizelelwa amahora angu-1 kuye kwayi-2. Ukufakwa kuhlungwa nge-cheesecloth bese kugcinwa esiqandisini. Phuza i-60 - 80 ml isigamu sehora ngaphambi kokudla inyanga.
Kungasetshenziswa isitshalo esibizwa ngokuthi i-stonecrop. Kungezwe kumasaladi bese kudliwa okuluhlaza ngamanani amaqabunga ama-3-4 ngosuku.
Ukuqedwa okusebenzayo kwezimpawu kungenzeka ngemuva kokusetshenziswa kwe-tincture yokwelapha. Uzodinga: amaqabunga e-lingonberry, ama-sitrobheli nama-aluhlaza okwesibhakabhaka, ama-stigmas ommbila kanye namaqabunga avela emabhonteni obhontshisi.
Zonke izithako zithathwa ngokulingana, gaya. I-isipuni esisodwa sithululelwa nge-mug yamanzi abilayo futhi sigcizelelwa amahora ayi-12 endaweni efudumele.
Cwilisa ngokusebenzisa i-cheesecloth bese uthatha ukumnika okuphulukisayo amasonto ama-2 engxenyeni yengilazi eyihora lehora ngaphambi kokudla.
Ukwelashwa usebenzisa i-mummy. Ingcezu encane ifakwe emlonyeni, inqubo yenziwa kanye ngosuku amasonto amabili. Ngomphumela omuhle kakhulu, i-mummy ithathwa ekuseni ngesisu esingenalutho. Kuyasiza ukuphuza amanzi amaminerali we-alkaline afudumele uma lesi sifo singaphandle kwesigaba esibuhlungu futhi singenazo izimpawu ezibukhali.
Isimo sengqondo sokuxwaya empilweni siyisihluthulelo sempilo ende nenempilo. Ngisho ne-cyst encane ingaholela ezinkingeni ezinkulu uma ungayiphathi ngesikhathi futhi ungalandeli izincomo zikadokotela.
Ama-cancts ama-pancreatic ayinkinga edlulwa yi-pancreatitis. Izimbobo ezinjalo zakhiwa ngomonakalo wezicubu zesitho, ukuphazamiseka kokujikeleza kanye nokuphuma kwejusi le-pancreatic.
Ngenxa yalezi zinqubo ezinjalo, kwakhiwa isigaxa endaweni yamangqamuzana afile, aboshwe ngezindonga zamaseli e-izicubu ezithintekayo. Imvamisa kugcwaliswa ujusi we-pancreatic, kepha okuqukethwe kwawo kungaba yimbumba, igazi noma ukuvuvukala okuvuvukala.
Inqubo yokwenziwa kwayo ingaba yinde - ukusuka ezinyangeni eziyisithupha kuya kweziyi-12.
I-cyst kuma-pancreas ezimweni eziningi ifomu endaweni yamaseli we-parenchyma efile. Ngokuvuvukala noma ukunqwabelana Ijusi le-pancreatic, izicubu zonakaliswa endaweni eyodwa. Ngaphezu kwalokho, le ndawo ivame ukukhawulelwa.
Kuyo, ukwanda kwezicubu ezithintekayo kwenzeka. Kancane kancane, amaseli omzimba abhubhisa ukugxila kokuvuvukala, kepha i-patity ingahlala.
I-cyst enjalo ye-post-necrotic igcwele amaseli afile, i-exudate yokuvuvukala, igazi, kodwa kaningi - ujusi we-pancreatic.
Kwesinye isikhathi i-cyst ayisibangeli isiguli noma imuphi umehluko. Kodwa ingacindezela imisele, okuholela ekuphulweni kokuphuma kwejusi le-pancreatic. Ngaphezu kwalokho, inkambo yayo ingaba yinkimbinkimbi. Kwesinye isikhathi kuvela ama-fistulas, i-cyst can suppate, ukopha kuzokwenzeka ngenxa yomonakalo emithanjeni yegazi.
Uhlobo olunhlobonhlobo lwe-pathology, lapho imithambo eminingi yakheka esifundeni se-gland, yi-cystic fibrosis noma i-cystic fibrosis. Lokhu kuyindlela yokuzalwa yofuzo ebonakala ngokuqina kwejusi le-pancreatic nokusika kwe-ducts ye-gland. Kepha ama-cysts akakhiwa hhayi kulesi sitho, kepha namaphaphu noma amathumbu.
I-cyst iyi-cavity eyindilinga egcwele uketshezi olungakheka nomaphi gland.
Esikhathini esiningi, konke ukwakheka okunjalo kumapancake kuhlukaniswe ngamaqembu amabili. Ama-cysts eqiniso afaka imisele efakwe ngamaseli we-epithelial kusuka ngaphakathi.
Zingakhiwa ngesikhathi se-pathologies ye-ducts ye-gland noma ngenxa yokulimala kokuthuthukiswa kwe-intrauterine. I-pseudocyst ukwakheka okwenzeka esizeni sokugxila kokuvuvukala.
Yize i-pathology enjalo ivame kakhulu ukwedlula ama-cysts ayiqiniso, ososayensi abaningi abahlukanisi eqenjini elihlukile.
Ngaphezu kwalokho, ama-cysts akhiwa ngesikhathi se-pancreatitis ahlukaniswa. Kunezindlela zokwakheka okuvame kakhulu ezingenayo izindonga zazo. Esikhundleni sabo kungaba yizindonga zemicengezi, i-gland uqobo noma ezinye izitho.
Kukhona ne-pathology efana ne-cystofibrosis, lapho kwakhiwa khona imithambo eyakhiwe kahle, imvamisa eyindilinga ngesimo. Izindonga zawo zakhiwe ngezicubu ezinemisipha. Icala elinzima kakhulu yilapho kwenzeka ithumba eligcwele ubomvu.
Lesi simo sibuye sibizwe ngokuthi ama-cysts, ngoba sakhiwa esikhundleni se-cyst egqamile noma izicubu ezifile ezine-necrosis.
Izindlela ezinjalo nazo zihlukaniswa ngokuya ngendawo yasendaweni. Imvamisa, i-cyst yekhanda le-pancreas iyakhiwa, ngoba lapha kunama-ducts amaningi, i-bile duct iyadlula, kunomyalezo nge-duodenum. I-cyst yomzimba noma umsila wama pancreas nawo ungavela.
Ngaphezu kwalokho, kwesinye isikhathi ama-cysts ahlukaniswa ngohlobo lwezicubu nesizathu sokubonakala:
kuvela kabuhlungu ngenxa yokulimala noma ukuqubuka okulimazayo esiswini,
izinambuzane ziyindlela yokusabela ukutheleleka ngegciwane, njenge-echinococci,
ukuzalwa kuvela ngesikhathi sokukhula kwengane,
ukuvela kuqubuka ngenxa yokuvinjwa kwemigqa,
ama-pseudocysts akhiwa endaweni yokufa kweseli.
Ama-Cysts angahluka endaweni, ngosayizi nasekugcwalisweni
Muva nje, lokhu kudalwa kwezifo sekuyinsakavukela. Ngaphezu kwalokho, imbangela yako ezimweni eziningi i-pancreatitis. Indlela ebabazekayo yalesi sifo, okuholela ekufeni kwamaseli we-parenchyma, cishe ku-15 ukuya ku-20% wamacala kuholela ekwakhekeni komgodi ofanayo.
Lokhu kwenzeka emavikini angama-3-4 ngemuva kokuqala kokuvuvukala, lapho kuvela indawo ye-necrosis ezicutshini zesikhumba. Kodwa ezimweni eziningi, imithambo enjalo yakhiwa ku-pancreatitis engapheli.
Ngaphezu kwesigamu seziguli, ikakhulukazi lezo ezingahambisani nezincomo zikadokotela, zibhekene nalokhu kutholwa.
Ukwakheka kwe-cyst ye-post-necrotic kungadala ukuphulwa kokuphuma kwejusi le-pancreatic, kunciphisa i-sphincter ye-Oddi, isifo se-gallstone. Zonke lezi zi-pathologies ziholela ekufeni kwamaseli e-pancreatic, futhi ezimweni eziningi amafomu we-patity asendaweni yawo. Kepha ezinye izizathu zingadala ukukhula kwenqubo enjalo:
ukwephula ukulethwa kwegazi emsebeni ngenxa yokuqhuma kwemithambo yegazi yi-thrombus,
ukuphazamiseka ekukhuleni kwe-intrauterine kohlelo lwe-ductal gland,
Akusikhona njalo ukwakheka kwe-cyst kubangela ukungaphatheki kahle kweziguli. Ukwakheka okuncane okunganciphisi izindunduma zesikhumba noma ezinye izitho kungenakuqashelwa isikhathi eside.
Ngaphezu kwalokho, ezimweni eziningi, ukwakheka kwayo kwenzeka ngokumelene nesizinda sezinqubo zokuvuvukala, ngakho-ke ubuhlungu buvezwa yi-pancreatitis. Ubuhlungu be-cyst bungaba mnene, bubonakalise ukungaphatheki kahle okuncane. Noma kwenzeka paroxysmally.
Ubuhlungu obukhulu buvela lapho i-cyst encipha imicu, izicubu zezinzwa, nezinye izitho zomzimba.
Uma i-cyst ikhula ibe ngu-5 cm noma icindezela izicubu ezizungezile, ingadala ubuhlungu, isicanucanu, kanye nokuqunjelwa.
Ngaphezu kwalokho, kungahle kube nezimpawu ezinjalo ze-pancreatic cysts efana nokukhuphuka kwezifo zesisu:
isicanucanu, kwesinye isikhathi sokuhlanza
i-belching, flatulence, ukushisa kwenhliziyo,
Ngenxa yokungafakwa kahle kwezakhamzimba, isisindo singancipha.
Uma i-cyst ikhula ngaphezu kuka-5 cm, izovela ekuphazamisekeni okukhulu kakhulu. Izimpawu zalesi simo zizoxhomekeka endaweni okwakheke ngayo. I-cyst etholakala ekhanda lendlala ihlala icindezela izindunduma ze-bile. Lokhu kubonakala ngesifo se-jaundice esivimbayo, ukulunywa kanzima kwesikhumba.
Ukuxineka kwemithambo yegazi kungadala ukwephulwa kokuhlinzekelwa kwegazi ezithweni zesisu ngisho nokuvuvukala kwemikhawulo engezansi. Ama-cysts amakhulu omsila we-pancreatic kwesinye isikhathi aphazamisa ukuphuma komchamo futhi aholele ekugcinweni komchamo, futhi angabuye anciphise amathumbu noma ubanzi.
Umphumela walokhu ukuphazamiseka kwamathumbu namanye ama-pathologies.